ကြောင်တွေကို အိပ်မက်မက်တယ် - အဲဒါ ဘာကိုဆိုလိုလဲ သိလား။ | Bezzia
Susana godoy | 22/06/2022 16:00 | ချစ်. ကစား
သေချာတာကတော့ မနက်အိပ်ရာနိုးတိုင်း အိပ်မက်မက်သမျှကို တွေးနေပါ။ သူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကို မမှတ်မိတဲ့သူတွေရှိပေမယ့် တခြားသူတွေကတော့ တစ်နေ့တာလုံး သူတို့ဆီမှာ ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောလို့ရတယ်။ ကြောင်တွေအကြောင်းစိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါ ဦး. အဲဒါက မင်းအတွက် ဖြစ်ဖူးသလား၊ အဲဒါက သင်္ကေတတွေအားလုံးကို တကယ်သိချင်လား။
အိပ်မက်များကို နက်နဲသောနည်းဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရမည်မှာ မှန်ပါသည်။ အဲဒါပါပဲ။ ၎င်းတို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသမျှသည် ကြီးမားသော သို့မဟုတ် နည်းပါးသောအတိုင်းအတာအထိ အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။. သို့သော် အချိန်အများစုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပို၍အကျိုးသက်ရောက်စေမည့် အစီအစဥ်များဖြင့် အထီးကျန်နေရသည်မှာ မှန်ပါသည်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ဒီကြောင်တွေက ငါတို့ကို ဘာပြောတယ်ဆိုတာ ဖော်ထုတ်သွားမယ်။
2 ကြောင်ငယ်လေးတွေ အများကြီးကို အိပ်မက်မက်တာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။
3 အိမ်အတွင်း၌ ကြောင်တစ်ကောင်ကို အိပ်မက်မက်ခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်
4 ကြောင်ကို နမ်းဖို့ အိပ်မက်မက်တယ်။
5 ကြောင်လေးတစ်ကောင်လို ခံစားရတယ်။
6 မင်းကို ကုပ်နေတဲ့ ကြောင်တစ်ကောင်ကို အိပ်မက်မက်တယ်။
ထို့ကြောင့် ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ကြောင်တွေကို အိပ်မက်မက်တာက ကံကောင်းခြင်းနဲ့ အဓိပ္ပါယ်တူပါတယ်။. အချစ်ရေးနဲ့ ငွေကြေးနယ်ပယ်နှစ်ခုလုံးနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒါကို ကျနော်တို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ ချမ်းသာမှုနှင့် အောင်မြင်မှု နှစ်ခုစလုံးသည် ဤတိရစ္ဆာန်များကို အိပ်မက်မက်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ သို့သော် အိပ်မက်ထဲတွင် မြင်နေရသည့်အရာပေါ်မူတည်၍ ကြောင်၏အရောင်များ၊ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသည်ရှိမရှိ စသည်ဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် အနည်းငယ်ကွဲလွဲနိုင်သောကြောင့် ထိုကဲ့သို့သောအဓိပ္ပာယ်မှာ အနည်းငယ်ယေဘုယျအားဖြင့် ယေဘုယျအားဖြင့်မှန်ပါသည်။
ကြောင်ငယ်လေးတွေ အများကြီးကို အိပ်မက်မက်တာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။
ဤအိပ်မက်အမျိုးအစားတွင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် နှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြောင်ငယ်လေးများကို အိပ်မက်မက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် အခွင့်အလမ်းသစ်များ၏ အစဟု ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အလုပ်သမားနယ်ပယ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်သော်လည်း ဝန်ထမ်းများကို မေ့မထားဘဲ၊. ဒါပေမယ့် သေချာပါတယ်၊ ငါတို့က ကြောင်လေးတွေ၊ ကြောင်လေးတွေနဲ့ ကြောင်လေးတွေအကြောင်း ပြောနေတာဖြစ်ပြီး ဒါက နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါက သင်အရမ်းခံစားလွယ်တယ်လို့ခံစားရပြီး သင်လက်ခံရရှိတာထက် ပိုချစ်ခင်မှုလိုအပ်တာ ဒါမှမဟုတ် သင်တောင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်တွေထဲက တစ်ခုကို မဖြတ်သန်းဖြစ်နိုင်သလို မင်းကို ထောက်ပံ့ဖို့ တစ်စုံတစ်ယောက်လိုတယ်။
အိမ်အတွင်း၌ ကြောင်တစ်ကောင်ကို အိပ်မက်မက်ခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်
ဤကိစ္စတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သော်လည်း အိမ်အတွင်း၌ရှိသော ကြောင်တစ်ကောင်နှင့် ဆက်ဆံနေသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်။ ဒါကြောင့် တိရစ္ဆာန်က ဝင်ပြီးဝင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ၊ အဲဒါကို မင်းမှာရှိတဲ့ လိုချင်တဲ့သူလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ အိမ်ထဲမှာ မြင်နေရရင် အူကြောင်ကြောင် ဝိုင်းနေလို့ မကောင်းဘူးလို့ ပြောတယ်။ မင်းကို ပြုံးပြပေမယ့် နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးဖို့ ကြိုးစားတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။
ကြောင်ကို နမ်းဖို့ အိပ်မက်မက်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ဘ၀တွင် အဖြစ်အများဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် အိပ်မက်များတွင်လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ကြောင်ကို နမ်းခြင်းသည် အိပ်မက်ထဲတွင် ပေါ်လာနိုင်သော အမူအရာဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သည့် အဆင့်မှ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အမျှ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတစ်ဦးကို အလွန်စိတ်ဝင်စားကြောင်း ဖော်ပြသည်။. ဒါပေမယ့် သတိထားရမှာက သူစားနေတဲ့အချိန်မှာ သူ့ကို နှိမ့်ချတယ်ဆိုရင် မင်းရဲ့အဖော် ဒါမှမဟုတ် မင်းသိနေတဲ့လူက နှစ်ဖက်လုံးဆော့နေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အခြားအချိန်တွေမှာ၊ ကြောင်ကိုယ်တိုင်မြင်စရာမလိုပါဘူး။ အိပ်မက်တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ တင်ဆက်နေကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သိပြီးသားပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ဤကိစ္စတွင်၊ သင်သည် ကြောင်အူသံကြားရသော်လည်း တိရိစ္ဆာန်ကို မမြင်ရသကဲ့သို့ တစ်ခုခုဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ကောင်းပြီ၊ မင်းသာ နားထောင်ရင် အဲဒါကို ဘာသာပြန်တယ်လို့ ငါတို့ ပြောရမယ်။ မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းအသိုင်းအဝိုင်းထဲက တစ်ယောက်ယောက်က မင်းထင်သလောက် မင်းကို အထင်မကြီးဘူး။. မင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာ သူက မင်းကို လိုအပ်တာထက် ပိုဝေဖန်နေပုံရတယ်။
မင်းကို ကုပ်နေတဲ့ ကြောင်တစ်ကောင်ကို အိပ်မက်မက်တယ်။
ကြောင်လေးတွေက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပေမယ့် ဒေါသလည်း ရှိတယ်။ သည်အထိ အိပ်မက်ထဲမှာ ခြစ်ရာ အကိုက်ခံရတာကို မြင်နိုင်သလို ခံစားရတယ်။. ကောင်းပြီ၊ ဤကိစ္စတွင်၊ ၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပုံမှန်သတင်းများကို ယူဆောင်လာသည်ဟု ဖော်ပြသင့်သည်- ပြဿနာများသည် သင့်ဘဝထဲသို့ ရောက်ရှိလာပြီး မတူညီသောအဆင့်များ၊ မိသားစုနှင့် အလုပ် သို့မဟုတ် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သည့်အရာများပေါ်တွင် ရှိနေနိုင်သည်။ ကြောင်တွေကို အိပ်မက်မက်တာ ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ အခု မင်းသိသွားပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » နေအိမ် » ချစ်. ကစား » ကြောင်တွေကို အိပ်မက်မက်တာ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ သိလား။
Body Mist - အဲဒါက ဘာလဲ၊ ဘယ်လိုသုံးရလဲ နဲ့ အများကြီးပိုတယ်။